ဖိုတိုအက်ဆေး ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ – Featured Collectives
Myanmar Street Photography
by Chit Min Maung
Article, Chit Min Maung, Featured, Featured Collectives, Photo Essay, Street Photography
တကယ်လို့များ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ စကားလုံးပေါင်းထောင်ချီပြီးညီမျှတယ်ဆိုရင် ဖိုတိုအက်ဆေးကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ စကားလုံးပေါင်းသန်းချီတန်နေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဖိုတိုအက်ဆေးတစ်ပုဒ်ဟာ ဆက်ရန်ရှိသည်များကို ဆက်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပါပဲ။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့တဲ့အခါ ဓါတ်ပုံများစွာပေါင်းပြီး တင်ပြဖို့ဆိုတာ ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။ ဒီနေရာမှာ ဖိုတိုအက်ဆေးတစ်ပုဒ်ဖန်တီးဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့အချက်ငါးချက်အကြောင်းလေး ပြောချင်ပါတယ်။
Chennai, India. 2015
© Chit Min Maung
ဖိုတိုအက်ဆေးရိုက်တဲ့အခါ တွေ့ကြုံရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေထဲက တစ်ဝက်လောက်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Subject တွေကို ရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အက်ဆေးစတင်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ Subject တစ်ခုကို ရှာဖွေယ်၊ အဲ့ဒီ့ Subject ဟာ ရိုက်ကူးသူခင်ဗျားကို စိတ်ဝင်စားစေမယ့်အရာ (ဝါ) ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာမျိုး၊ နောက် ခင်ဗျားရိုက်ကူးဖို့အတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ ဥပမာ ဒီဆောင်းပါးမှာ ပါဝင်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေဆိုရင် တကူးတကခက်ခက်ခဲလိုက်ရှာနေစရာမလိုပဲ လမ်းမှာသွားရင်းလာရင်း ဒါမှမဟုတ် တိုက်ခန်းလှေခါးကြား၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်၊ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေမှာ တွေ့နိုင်တဲ့ လူတွေအလွယ်တကူစွန့်ပစ်သွားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုတိုအက်ဆေးရိုက်တဲ့အခါ အရေးကြီးတဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်က ပါဝင်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေဟာ ဇာတ်လမ်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအရာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပေးချင်တဲ့ဆိုလိုရင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံဆက်စပ်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံ အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်နေဖို့လိုပြီး ဇာတ်လမ်းကိုပံ့ပိုးပေးနေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့များ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ ဇာတ်လမ်းကိုအထောက်အပံ့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့တွန့်တိုမနေသင့်ပါဘူး။ တစ်ပုံခြင်းစီထက် ဖိုတိုအက်ဆေးရိုက်ခြင်းရဲ့ ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှံ့နှံ့စပ်စပ်ပြောနိုင်ပြီး ကြည့်တဲ့သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွေအများကြိးထပ်ထပ်ရိုက်နေရခြင်းက ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို အမြင်အမျိုးမျိုးကနေမြင်လာစေနိုင်ပြီး အချိန်ကာလတစ်ခုယူရတဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းသွားမှာ အချိန်ကိုပါထည့်သွင်းပြသနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
တူညီတဲ့အရောင်အသွေး၊ တူညီတဲ့ Format တစ်ခုတည်းဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တုန်းများကို တသမတ်တည်းသုံးခြင်းဟာ အက်ဆေးမှာပါဝင်နေတဲ့ဓါတ်ပုံများကို ပိုပြီးအတူတကွဖြစ်စေပါတယ်။ ဥပမာ အဖြူအမဲပုံဖြစ်လိုက်၊ ကာလာဖြစ်လိုက်၊ Retro စတိုင်ဖြစ်လိုက် ဖြစ်နေခြင်းဟာ ပုံများကို တသီးတသန့်ဖြစ်စေပါတယ်။ တချို့ဆို Frameline တစ်ခုတည်းကိုသုံးခြင်း၊ ဖလင်သုံးပြီးရိုက်ကူးတယ်ဆိုလျှင်လည်း ဖလင်အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းသုံးရိုက်ကူးခြင်း၊ lens ဆိုရင်လည်း Focal length တစ်ခုတည်း၊ Format ဖြတ်တောက်တဲ့အခါ အားလုံးကို Square Format သော်လည်းကောင်း၊ 4:3 သော်လည်းကောင်း တသတ်မတ်တည်းသုံးခြင်းအထိ လုပ်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဓါတ်ပုံများကို အမြင်အားဖြင့် တစုတဝေးတည်းဖြစ်စေပါတယ်။ Post-processing လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ပုံအားလုံး တသမတ်တည်းဖြစ်နေခြင်း၊ Vignette ထည့်သွင်းခြင်းမှအစ တသတ်မတ်တည်းသုံးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Shot List အသုံးပြုခြင်းဟာလည်း ဖိုတိုအက်ဆေးဖန်တီးဖို့စီစဉ်ရာမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အထောက်အပံ့ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံမျိုးကို ရိုက်ကူးမယ်၊ အဲ့လိုရိုက်ကူးဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်ရမယ် စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့လည်း အားလုံးကို ဒီ Shot List မှာ ထည့်သွင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ အခြေအနေအရ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတာ၊ မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့ Shot List လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် အဓိကကျတဲ့အချက်တွေကို မေ့ကျန်ခဲ့စေတာမျိုးမဖြစ်စေပဲ အက်ဆေးဖန်တီးရာမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်အလက်တွေရရှိဖို့ အခွင့်အရေးရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားခေတ်ပြိုင်တွေရဲ့ အက်ဆေးများကိုလေ့လာခြင်း၊ အရင်ခေတ်က ဆရာ့ဆရာများရဲ့ ဖိုတိုအက်ဆေးများကို လေ့လာခြင်းဟာလည်း ကြီးမားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူများဖိုတိုအက်ဆေးများကိုကြည့်ပြီး ဘယ်နေရာမှာရိုက်သွားတာ ကောင်းတယ်၊ ငါဆို ဒီနေရာမှာ ဘယ်လိုရိုက်မယ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ခြင်း၊ ဘယ်အရာတွေက ဒီဖိုတိုအက်ဆေးကို အောင်မြင်စေတာလဲဆိုတာ မြင်အောင်ကြည့်ခြင်းများကလဲ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်အဲ့ဒီ့ထဲက ထူးခြားပြီးအရေးပါတဲ့အချက်အလက်များကို ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ထည့်သုံးသင့်ပါတယ်။ စာရေးတဲ့အခါ သဒ္ဒါဝါကျမှန်ဖို့အရေးကြီးသလို ဓါတ်ပုံပညာမှာလည်းထိုနည်းနှင်နှင်ပါပဲ။ တခြားသူတွေဖန်တီးခဲ့တာတွေ များများလေ့လည်လေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်း ပြောင်းလဲတိုးတက်လာလေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြထားတဲ့ link တွေမှာ ဖိုတိုအက်ဆေးများ သွားရောက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Invisible Photo Asia
Myanmar Street Photographers
Help For The Hopeless by Min Zayar
Food, Not Bombs by Min Zayar
The Lonely Ones by Chit Min Maung
အလွယ်တကူလက်လှမ်းမှီတဲ့ Website တွေကို အထက်မှာဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီစာရင်းထဲပါခြင်းမပါခြင်းဟာ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမဟုတ်တဲ့အကြောင်း တင်ကူးတောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
Posted by Chit Min Maung
Chit Min Maung, originally from Myanmar, has been in Singapore since 2009 lately. After finishing university, Chit eventually made his way into software house and work as many different positions such as the programmer, system analyst, Team Leader, Project Manager, etc. Following his passions, in 2011 he bought his own very first camera and shoot various types of photography styles. Since then, he enjoyed shooting street photography, fine art black and white and beyond. Chit didn't shoot photos for the living. He shoots for passions.
Monthly Archives Select Month October 2021 (8) September 2021 (4) May 2021 (3) April 2021 (3) March 2021 (11) February 2021 (22) January 2021 (2) December 2020 (8) November 2020 (13) October 2020 (8) September 2020 (23) August 2020 (34) July 2020 (87) June 2020 (81) May 2020 (55) April 2020 (21) March 2020 (55) February 2020 (58) January 2020 (48) December 2019 (40) November 2019 (48) October 2019 (46) September 2019 (45) August 2019 (48) July 2019 (44) June 2019 (52) May 2019 (62) April 2019 (67) March 2019 (34) February 2019 (37) January 2019 (49) December 2018 (45) November 2018 (45) October 2018 (49) September 2018 (54) August 2018 (52) July 2018 (50) June 2018 (71) May 2018 (99) April 2018 (122) March 2018 (113) February 2018 (107) January 2018 (115) December 2017 (142) November 2017 (143) October 2017 (135) September 2017 (117) August 2017 (84) July 2017 (92) June 2017 (94) May 2017 (80) April 2017 (91) March 2017 (78) February 2017 (71) January 2017 (83) December 2016 (104) November 2016 (76) October 2016 (64) September 2016 (61) August 2016 (62) July 2016 (63) June 2016 (56) May 2016 (73) April 2016 (103) March 2016 (143) February 2016 (81) January 2016 (80) December 2015 (65) November 2015 (50) October 2015 (75) September 2015 (71)
© 2021 Featured Collectives |
| Rules & Regulations